Social distancing နှင့် ကာမဘဝ။ - Asia.gay
Social distancing နှင့် ကာမဘဝ။
အခုကိုဗဒ်ကာလအတွင်းချထားပြုကျင့်နေရတဲ့ social distancing ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ကာမဘဝတွေ၊ HIVနဲ့ တစ်ခြားလိင်မှတစ်ဆင့်ကူးစက်ရောဂါ ကုသမှုတွေအပေါ် ဘယ်လိုထိရောက်မှုတွေ ရှိနိုင်မလဲဆိုတာ ဒီစာစောင်ကနေဖော်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
၁. ပထမဆုံး social distancingဆိုတဲ့စာကြောင်းလေးကိုအရင်လေ့လာကြည့်ရအောင်။
ဒီစာကြောင်းကိုမြင်ရကြားရတာနဲ့ လူ့ဘောင်လောကနဲ့ဝေးနေရသလိုခံစားရပြီး စိတ်ညစ်ဖွယ်ကောင်းလှပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကိုးဗဒ်ကိုကာကွယ်တဲ့အနေနဲ့ လူတစ်ဦးနှင့်တစ်ဦးအရင်ကလို ပူးပူးကပ်ကပ်မနေပဲ ကင်းကင်းကွာကွာနေရန်လိုအပ်နေပါတယ်။ ဒါမှ မိမိမှာကူးစက်ခံနေရရင်သူတစ်ပါးကိုမကူးစက်ပဲ သူတစ်ပါးကူးစက်ခံနေရရင်လဲမိမိကိုယ်ကိုမကူးစက်ခံရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလိုရေမြေကွာခြားနေရပေမဲ့လည်း ဖုန်းဆက်တာ၊ video ကောလ်လုပ်တာ စသဖြင့် လူမှုကွန်ရပ်ကနေတစ်ဆင့်အဆက်အသွယ်လုပ်ပြီး အချင်းချင်း ဆက်သွယ် ကျန်းမာအောင်နေလို့ရပါတယ်။
၂. HIV ပိုးကုသမှုခံယူနေသူတွေအတွက် ရေမြေခြားမှုကြောင့် ဆက်လက်ကုသမှုအပေါ်ထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။
lockdown တွေကြောင့် တိုင်းတစ်ပါးမှာတစ်နေသူများဟာ ကိုယ်ရောက်ရှိနေတဲ့နိုင်ငံပေါ်မူတည်ပြီး လိုအပ်တဲ့ဆေးဝါးတွေရရှိဖို့ အခက်အခဲတွေလည်းကြုံတွေ့ကောင်း ကြုံတွေ့နေရပါလိမ့်မယ်။ ဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံတွေမှာ သုံးနေတဲ့နောက်ဆုံးပေါ်ဆေးတွေဟာ များသောအားဖြင့် ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံတွေမှာ ရရှိဖို့ခဲရင်းပါတယ်။ ဒီလိုဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံက ရောဂါသည်တွေဟာ ခရီးသွားရင်း အခုလမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကန့်သန့်မှုတွေကြောင့် HIV ကုသမှုအတွက်လိုအပ်တဲ့ ဆေးကုသမှုမပေးနိုင်တဲ့နိုင်ငံတွေမှာ သောက်တင်နေရပါက HIVရောဂါသည်တွေရဲ့ အဆက်မပြတ် ကုသမှုကိုထိခိုက်နိုင်ပါတယ်။
HIVဆေး၂ပတ်လောက်ပြတ်လိုက်တာနဲ့ ခန္တာကိုယ်ထဲက HIVပိုးဟာပြောင်းလဲမှုဖြစ်နိုင်ပြီး လက်ရှိကုထုံးဆေးတွေကို ခံနိုင်ရည်ရှိ ဆေးမတိုးနိုင်အောင်ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် မိမိရေရှည်သုံးဆွဲလာတဲ့ ကုသမှုကြီးအသုံးမဝင်ဖြစ်စေပြီး ဆေးအသစ်တွေပြောင်းပြီးသောက်ရမှာပါ။ ဆေးအသစ်မရနိုင်ဘူး ဆိုရင်တော့ AIDSရောဂါပြန်ဖြစ်ပြီး ကိုးဗဒ်ကြောင့်AIDS ကပ်ရောဂါကြီး ပြန်လည်ရောက်ရှိလာနိုင်ပါတယ်။
ကာလသားရောဂါနောက်ဆုံးအဆင့်ဖြစ်နေသူများဟာကုထုံးအရ တစ်ပတ်တစ်ကြိမ် သုံးပတ်ဆက်တိုက် ဆေးထိုးရန်လိုအပ်ပါတယ်။ ဒီလို လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးတွေတင်းကျပ်မှုကြောင့် တစ်ချို့သူတွေဆေးကုသမှုအပြည့်မရနိုင်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အသည်းရောင်အသားဝါ C ပိုးလည်းဒီလိုပါပဲ။ အသည်းရောင်အသားဝါ C ပိုးကုထုံးကတော့ ဆေးတစ်လုံးတစ်နေ့တစ်ကြိမ်ကို ၃လအထိသောက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုဆက်တိုက်သောက်နိုင်မှသာ ရောဂါကိုအပြတ်ကုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
၄.တစ်ဦးတည်း ကင်းကွာနေထိုင်ခြင်းဟာ လူတွေကိုအထီးကျန်စေပါတယ်။
Social distancing လုပ်ရန်လမ်းညွှန်ချက်များရှိနေသော်လည်း app တွေသုံးပြီးတွေ့ကြလုပ်ကြတာတွေရှိနေမှာပါ။ လူသားတို့သဘာဝ တွေ့ဆုံအထိအတွေ့လိုအပ်တာ သဘာဝပါ။ အခုအချိန်မှာ ခါတိုင်းလိုမိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းများနဲ့မတွေ့ရတော့ sex date တွေနဲ့ဖြည့်စီးကြတာပေါ့။ ဒီကပ်ဘေးကြီးထဲမှာ ဖြတ်သန်းနေတုံး စိတ်ရောလူရော လူမှုရေးအရရော ကျန်းမာဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
၅. Sex date လုပ်တာတွေပိုများလာနိုင်ပါတယ်။
တစ်ဦးတည်း ကင်းကင်းကွာကွာနေရတာဟာလူတွေကိုကာမစိတ်တွေပြင်းထန်လာစေနိုင်ပါတယ်။ လူ့သဘာဝတစ်ယောက်ထဲ အထီးကျန်ရတာကိုမကြိုက်နှစ်သက်ကျပါဘူး။ ဒါကြောင့် lockdown ဆိုပေမဲ့ ခိုးပြီးတွေ့ကျ sex date လုပ်ကျတာတွေရှိနေတာပေါ့။ ကိုးဗဒ်ကတော့ လိင်ကနေမကူးစက်နိုင်သော်လည်း နှစ်ဦးသားပူးကပ်လုံးထွေးနေတဲ့ အချိန်မှာတော့လေကနေတစ်ဆင့်ကူးစက်နိုင်ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ လိင်မှတစ်ဆင့်ကူးစက်ရောဂါ sex date ပါတစ်နာ မှာရှိခဲ့မယ်၊ ပြီးတော့သူက ကိုးဗဒ်ကြောက်လို့ဆေးရုံမသွားခဲ့ဘူးဆိုရင်တော့ ရောဂါတွေပြန့်ဖို့လွယ်ကူသွားပါပြီ။ လိင်ဆက်ဆံတဲ့အချိန်မှာ ဘက်တီးရီးရားတွေ ဗိုင်းရ်စ်ပိုးတွေဟာ နမ်းတာ၊လျက်တာ၊စုပ်တာကနေတစင့်ကူးစက်နိုင်ပါတယ်။
ပြီးတော့ ဒီဘက်တီးရီးရားတွေ ဗိုင်းရ်စ်ပိုးတွေဟာ အမျိုးသားတွေနဲ့ပဲအိပ်အိပ် အမျိုးသမီးများနဲ့ပဲအိပ်အိပ် နှစ်မျိုးစလုံးနဲ့ပဲအိပ်အိပ် လူမျိုးအသားအရောင်ဘာသာမရွေးကူးစက်နိုင်တာဖြစ်လို့ လိင်ဆက်ဆံမှုရှိတယ်ဆိုရင် လိင်ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှုကိုပြုလုပ်ရန်အရေးကြီးပါတယ်။
ဒါကြောင့် လိင်ဆက်ဆံမှုရှိတယ်ဆိုရင် ပုံမုန်ဆေးစစ်ပြီးကုသမှုယူရန်လိုအပ်လှပါတယ်။
ယခုအခါမှာ တိုင်းဒေသ ဆေးရုံကြီးတွေကို ကိုးဗဒ်ကုသရန်နေရာအများချထားရတာဖြစ်တဲ့အတွက် အခြားရောဂါကုသမှုအတွက်လုပ်အားရော့နည်းမှုတွေရှိကောင်းရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် လိင်ကူးစက်ရောဂါစသဖြင့် ကိုးဗဒ်နဲ့မပက်သက်တဲ့ရောဂါရှိခဲ့ပါက ထိုဆေးရုံကြီးတွေကိုမသွားပဲ သီးသန့်အထူးကုဆေးရုံ ဆေးကုခန်းတွေကို တတ်နိုင်သမျှပြောင်းသွားပေးကြရန်လိုအပ်ပါတယ်။
Prevယခင်Macronutrient တွေရေတွက်ခြင်းဖြင့် ကြွက်သားဗလများအမြောင်းလိုက်ဖွံ့ဖြိုးထင်ပေါ်လာနိုင်မလား?
နောက်တစ်ခုဆရာ Dr Love ရေ, ကျွန်တော်ဂွင်းထုတာများနေသလား?Next